Nchịkọta foto ntanetị nwere mmetụta ma ọ bụghị naanị: Befunky
Na nyochaa a, M na-agwa gị ka ị mara onye nchịkọta foto ntanetị online, Befunky, bụ isi nzube ya bụ itinye mmetụta na foto (ya bụ, nke a abughi onye foto ma ọ bụ ọbụna Pixlr na nkwado maka ọkwa na ikike ike ntụgharị ike). Tụkwasị na nke ahụ, a na-akwado ọrụ nhazi ederede, dị ka ịgha, na-emegharị, ma na-agbanwegharị onyinyo ahụ.
Oge dị mma! Site na protocol FTP, ị nwere ike ịnyefe faịlụ na nchekwa na netwọk na netwọk mpaghara. N'otu oge (tupu ebute mmiri) - e nwere puku puku FTP na-egosiputa ọ bụla faịlụ. Ka o sina dị, ma ugbu a, usoro FTP dị ezigbo mma: dịka ọmụmaatụ, na ejikọta na sava ahụ, ịnwere ike bulite weebụsaịtị gị; site na iji FTP, ị nwere ike ịnyefe faịlụ nke ọ bụla ọ bụla (ọ bụrụ na enwere ike ịkwụsị - a ga-enwe ike ibudata nbudata site na mgbe "ịkwụsị", mana esiteghị ya ọzọ).
Ịtọlite ​​redirect Zyxel Keenetic maka Beeline
Zyxel Keenetic GIGA Wi-Fi router Na ntuziaka a, m ga-agbalị ịkọwa n'ụzọ zuru ezu usoro nke ịmepụta Wi-Fi ndị Zyxel Keenetic akara iji rụọ ọrụ na Intanet site na Beeline. Ịhazi Keenetic Lite, Giga na 4G routers maka onye ọrụ a na-eme otu ụzọ ahụ, ya mere, n'agbanyeghị ụdị onye nrụnye ọ bụla i nwere, ntụziaka a kwesịrị ịdị irè.
N'ịbụ ndị a ma ama nke ndị na-agagharị Wi-Fi n'ụlọ, mbipụta nke ọdụ ụgbọ mmiri na-eto eto na-eto eto n'otu ọnụego. N'okwu a nke taa, m ga-achọ ịme ihe atụ (nzọụkwụ site na nkwụsị) iji kwụsị otu esi emeghe ọdụ ụgbọ mmiri na njikwa redire dị njikọta atọ (330, 450 - ụdị ndị yiri ya, nhazi ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu), yana nsogbu ndị ọtụtụ ndị na-eme n'ụzọ .
N'agbanyeghi na ugbochi nke D-Link DIR-300 D1 Wi-Fi router, nke di na nso nso a, abughi ihe di iche site na nyocha ndi ozo di na mbu, ndi oru nwere ajuajiri ajuju mgbe ichoro ibudata ngwa ngwa site na ulo oru D-Link. , yana yana ntanetị weebụ dị ọhụrụ na nsụgharị firmware version 2.
Nsogbu mgbe ị na-emepụta Wi-Fi rawụta
Ya mere, ị hazila onye na-ahụ maka ekwentị gị, ma n'ihi ụfọdụ, ihe anaghị arụ ọrụ. M ga-anwa ịchọta nsogbu kachasị mkpa na ndị na-eme Wi-Fi na otu esi edozi ha. Ihe ka ọtụtụ n'ime nsogbu ndị akọwapụtara ga-eme na Windows 10, 8.1 na Windows 7 na ihe ngwọta ga-adị.
Ngwá ọrụ ọcha nke Chrome iji dozie nsogbu nchọgharị
Nsogbu ndị ọzọ na Google Chrome bụ ihe a na-ahụkarị: peeji nke na-adịghị emeghe ma ọ bụ ozi ezighị ezi na-egosipụta kama nke ha, mgbasa ozi gbanyụọ mgbapụta na-egosipụta ebe ọ na-ekwesịghị ịdị, ihe yiri ya na-eme kwa ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla. Mgbe ụfọdụ, malware na-eme ha, mgbe ụfọdụ site na njehie na ntọala ihe nchọgharị, ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, site na ndozi mmemme Chrome na-ekwesịghị ekwesị.
Enweghị m ike ịkpọtụrụ
"Adịghị abanye na kọntaktị", "hacked profiles Vk", "Enwere ike igbochi akaụntụ," enweghị m ike ịbanye na ya - jụọ maka nọmba ekwentị ma ọ bụ koodu mmegharị, na oku yiri maka enyemaka, soro ajụjụ nke ihe ị ga - eme ajụjụ niile na azịza m mara na netwọk. Isiokwu a ga-ekwu maka ụzọ dị mfe iji dozie nsogbu mgbe ị na-enweghị ike ịbanye.
Ịtọlite ​​L2TP na ntanetị ASUS RT-N10 (Ịntanetị Ịntanetị)
A na-ewere ndị na-emegharị ihe na ASUS dị n'etiti ndị kachasị mma: ha dị mfe ịhazi na ha na-arụ ọrụ nke ọma. Site n'ụzọ, n'ikpeazụ, ejiri m n'aka n'onwe m mgbe onye na-arụ ọrụ ASUS na-arụ ọrụ ruo afọ atọ ma na okpomọkụ ma na oyi, na-edina ebe na tebụl n'ala. Ọzọkwa, m gaara arụ ọrụ ọzọ ma ọ bụrụ na m agbanwebeghị onye na-eweta ya, yana ya na router, mana nke ahụ bụ akụkọ ọzọ ... N'isiokwu a, m ga-agwa gị obere ihe gbasara ịhazi njikọ L2TP na Intaneti na ASUS RT-N10 router (site n'ụzọ, ịtọzi nke a Njikọ ahụ bara uru ma ọ bụrụ na ị nwere Intanet site na Billline (ọ dịkarịa ala, tupu e nwee ihe dị otú a ...)).
Njehie INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND na Microsoft Edge Windows 10
Otu n'ime njehie ndị na-emekarị na Microsoft Edge Browser bụ na enweghi ike imeghe ozi a na koodu njehie INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND na ozi "Aha DNS ahụ adịghị adị" ma ọ bụ "E nwere njehie DNS na-adịru nwa oge. Na isi ya, njehie ahụ yiri ọnọdụ dị na Chrome - ERR_NAME_NOT_RESOLVED, naanị na Microsoft Edge nchọgharị na Windows 10 na-eji koodu njehie ya.
Zigharịa onye rawụta gị onwe gị
Ihe dị otú ahụ dị ka ịmepụta onye na-akwọ ụgbọala taa bụ n'otu oge ọrụ otu kachasị, otu n'ime nsogbu kachasị maka ndị ọrụ, yana otu n'ime ajụjụ ndị dị na Yandex na ọrụ ọchụchọ Google. Na weebụsaịtị m, edewo m ihe karịrị ntuziaka iri na abụọ gbasara otu esi hazie ndị na-arụ ọrụ dị iche iche, na-arụ ọrụ dị iche iche na maka ndị dị iche iche.
Kedu otu esi achọpụta adreesị IP na mpụga nke kọmputa gị?
Kọmputa ọ bụla na netwọk ahụ nwere adreesị IP pụrụ iche, nke bụ nọmba nke nọmba. Dịka ọmụmaatụ, 142.76.191.33, maka anyị, ọnụ ọgụgụ nkịtị, na maka kọmputa - ihe nchọpụta pụrụ iche na netwọk ebe ozi si, ma ọ bụ ebee ga-ezite ya. Ụfọdụ kọmputa na netwọk nwere adreesị na-adịgide adịgide, ụfọdụ na-enweta ha mgbe ejikọrọ ha na netwọk (ụdị adreesị IP a na-akpọ ike).
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịgbanwe ụfọdụ ntọala nke router, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ị ga-eme nke a site na ntanetị ntanetị nke weebụ nke router. Ụfọdụ ndị ọrụ nwere ajụjụ banyere otu esi abanye ntọala nke router. Banyere nke a na okwu. Otu esi abanye ntọala nke onye ntanetị D-Link DIR N'ihe mbụ, banyere onye ntanetị ikuku kachasị na mba anyị: DIR-DIR (DIR-300 NRU, DIR-615, DIR-320, na ndị ọzọ).
Esi weghachite ihu na ibe
Ogologo oge gara aga, e nwere otu isiokwu dị na isiokwu nke ihichapu profaịlụ gị na kọntaktị, taa anyị ga-ekwu banyere otu esi eweghachi ibe: ma ehichapụ ma ọ bụ gbochie adịghị mkpa. Tupu ịmalite, ana m agwa gị ka ị ṅaa ntị na otu ihe dị mkpa: ọ bụrụ na ị banye na kọntaktị ị hụrụ ozi na-ekwupụta na e gbochire ibe gị na ntanye nke hacking, na-eziga spam, ma a gwara gị ka itinye nọmba ekwentị ma ọ bụ zipu SMS ebe , ma, n'otu oge ahụ, site na kọmputa ma ọ bụ ekwentị ọzọ, ị nwere ike ịga na ibe gị na kọntaktị, mgbe ahụ, ịchọrọ ọzọ isiokwu - Enweghị m ike ịnweta kọntaktị, ihe niile bụ na ị nwere nje (ma ọ bụ, kama nke ahụ, malware ) na kọmputa na ntuziaka ndị a kapịrị ọnụ ị ga-ahụ otu esi ewepu ya sya.
Ka anyị kwuo banyere otu esi edozie redio DIR-300 ma ọ bụ DIR-300NRU ọzọ. Oge a, ntụziaka a agaghị ejikọta ya na onye na-eweta ọrụ (Otú ọ dị, ozi gbasara njikọ nke ndị isi ga - enye ya), ọ ga - abụrịrị mkparịta ụka banyere ụkpụrụ nchịkọta nke nrụpụta a maka onye ọ bụla na - eweta - ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịtọ njikọ nke Ịntanetị na komputa, ị nwere ike ịhazi ihe rawụta a.
Ịhazi D-Link DIR-300 B5 B6 na B7 F / W 1.4.1 na 1.4.3
Onye na-eweta Wi-Fi D-Link DIR-300 NRU rev. B7 Ọ bụrụ na ị nwere onye ọ bụla D-Link, Asus, Zyxel ma ọ bụ TP-Link routers, na onye na-eweta Beeline, Rostelecom, Dom.ru ma ọ bụ TTC na ị dịbeghị melite Wi-Fi routers, na-eji nke a mmekọrịta Wi-Fi rawụta setup ntụziaka Gị, dịka onye nwe ihe ntanetị Wi-Fi D-Link DIR-300 NRU B5, B6 ma ọ bụ B7, o doro anya, nwere nsogbu ọ bụla na ịmepụta ihe a.
Etu ibudata ihe ngbaputa maka Google Chrome ma gbanyụọ ngwa mgbakwunye ngwa-ngwa
Ọ bụrụ na Google Chrome nchọgharị na kọmputa gị na mberede malitere ịdaba ma ọ bụ ọdịda ndị ọzọ na-eme mgbe ị na-agbalị igwu egwu ọdịnaya, dị ka vidiyo na kọntaktị ma ọ bụ ụmụ klas gị, ọ bụrụ na ị na-ahụ ozi mgbe niile "nkwụnye na-esote: Shockwave Flash", ntụziaka a ga-enyere aka.
Ịhazi D-Link DIR-300 B6 Beeline
Ana m akwado iji ntuziaka ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ na-agbanwe agbanwe ngwa ngwa na ịmepụta router maka ịrụ ọrụ dị mma na Beeline Go. Leekwa: ịtọpụta redire DIR-300 video. Ya mere, taa m ga-agwa gị otu esi hazie D-Link DIR-300 rev. B6 na-arụ ọrụ na Ịntanetị Beeline.
Ịhazi Deline DIR-615 Beeline
WiFi rawụta D-Link DIR-615 Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi hazie WiFi rawụta DIR-615 na Beeline. Ngwaọrụ a nwere ike ịbụ nke abụọ kachasị mara amara mgbe DIR-300 a maara nke ọma, anyị enweghị ike ịgafe ya. Nzọụkwụ mbụ bụ iji jikọọ eriri na-enye ọrụ (na nke anyị, nke a bụ Beeline) na njikọ kwekọrọ na azụ nke ngwaọrụ ahụ (ọ bụ Ịntanetị ma ọ bụ WAN).